Toriteny 15 Septambra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 15 Septambra 2013
Joela 4 : 14-23 / Lioka 12 : 8–12 / Romana 15 : 1-8
Amin’ny atao rehetra dia misy eritreritra na fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny tsirairay manao hoe « Iza no antoka afaka hiaro ahy amin’ity zavatra ataoko ity? ». Ao an-tsaintsika Malagasy mandrakariva ny mitady hery hafa ianteherana. Ny bokin’i Joela no handraisantsika fampianarana indray anio. Boky izay mampahafantatra antsika indrindra ny amin’ny fitsaran’Andriamanitra izay tsy maintsy ho avy.
Vonona amin’izany fitsaran’Andriamanitra izany ve isika ?
Mila manana fiomanana tokoa isika satria tsy misy afa- mandositra ho amin’izany fitsaran’Andriamanitra izany, na ny efa mino na ny tsy mbola mino. Zavatra roa no mety hovalin’ny fitsarana na meloka na voaheloka. Olona manao ahoana ary ho afa-mandositra izany fanamelohana izany ? Ny bokin’i Lioka 12 dia mamaly avy hatrany fa “Na zovy na zovy no manaiky Ahy eo anatrehan’ny olona, dia heken’ny Zanak’olona kosa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra”
Izany hoe ny fanekeko an’I Jesoa eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona no hiaro ahy ka afaka hanamarina ahy amin’ny fitsarana tsy maintsy atrehiko.
Inona no takiana amin’ny olona efa nanaiky an’i Jesoa ?
Mahatsiaro sahirana anefa Andriamanitra mitondra antsika ; satria na dia efa nanaiky an’I Jesoa aza ny maro amintsika Kristiana dia mbola manaonao foana ihany, tsy mety hanaiky sy hanaraka izay raketin’ny Teniny fa miovaova, manaraka volon-tany ; tsy mety mijoro tsara ho mpanompon’i Kristy araka izay mba andrasany amintsika.
Mampahatsiahy antsika Kristiana izao Perikopa izao fa tsy fotoana intsony izao hisahiranan’Andriamanitra amintsika; fa kosa takian’Andriamanitra ny handraisantsika fanapahan-kevitra ho mpiara-miasa sy mpiara-miombon’antoka amin’Andriamanitra amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Io no vavolombelon’ny fanekena an’I Jesoa.
Inona no ampitain’ny loha-hevitra hoe :« manantena fiarovana ny mino » ?
Ny olona arovan’Andriamanitra dia ireo izay manaiky an’Andriamanitra amin’ny fiainany amin’ny fotoana rehetra. Ary Andriamanitra hamonjy azy ; tsy amin’ny amin’ny andro farany ihany fa n’aiza n’aiza misy azy dia maniraka ny anjeliny Andriamanitra hitoby manodidina izay matahotra Azy ; Antoky ny fandresen’i Davida tamin’ny ady rehetra natrehiny ny fangatahany tolo-tsaina avy amin’Andriamanitra ary indrindra ny fankatoavany izany.
Tsy lany andro ny Tenin’Andriamanitra fa mbola marina mandrak’ankehitriny. Ekeo Jesoa Tompo ho Tompo sy Mpamonjy ny fainanao ; meteza ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra dia voaaro ianao amin’ny fainanao rehetra.
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 18 septembre 2013